प्रधानमन्त्री ज्यु,हामी किडनी फेर्न होईन पसिना बेच्न जाने हो भन्दै ईपिएस पिडित द्वारा तेस्रो चरणको र्याली सम्पन्न ! – Kantipur Press
दक्षिण कोरिया जाने वातावरणको माग गर्दै कोरिया जान तयारी अवस्थामा रहेका श्रमिकहरुले आज पुन: माईतीघर मन्डलामा तेस्रो चरणको दबाब र्याली भब्य प्रदर्शन।
दक्षिण कोरियामा रोजगारीमा जान सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी उडानको पर्खाइमा रहेकाहरुले आज ( मंगलबार ) पुन: काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण सम्पूर्ण उडानहरु बन्द भएपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा भए पनि कोरिया जान नपाएकाहरुले आज काठमाडाैंकाे माईतीघर मन्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका हुन् ।
१/२ हप्ता भित्र सरकारले कोरिया पठाउनको लागि पहल नगरे करिब ४५ सय जनाको रोजगारी गुम्न सक्छ, प्रर्दशनका संयोजक अजय सोडारीले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार सो रोजगारी गुमेपछि अधिकांशको करिब ४ वर्षको मेहेनत खेर जान्छ ।
सरकारले आफ्नो माग पूरा नगरेसम्म सडक आन्दोलन नछोड्ने सोडारीको भनाइ छ । प्रदर्शनमा ‘सरकार पसिना बेच्न जान्छौँ भनेका हौँ पहिचान होइन’ कि रोजगारी देउ, कि रेमिट्यान्स छाडिदेउ, जस्ता नारा लेखिएका प्ले कार्ड बोकेका थिए ।
हेउन्दे फादा लगायत बुसानका प्रसिद्द ५ सामुन्द्रिक तटमा जानेले अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने! मास्क नलगाउने लाई ३० लाख वन सम्म जरिवाना ।